Fa maninona ny mpividy no voafehin'ny B2B E-Commerce Personalization (ary ny fomba fanamboarana azy) | Martech Zone
Fa maninona ny mpividy no mahamenatra ny B2B E-Commerce Personalization (ary ny fomba hamahana azy)
Talata, Desambra 21, 2021 Talata, Desambra 21, 2021 Tim Beyer
Ny traikefan'ny mpanjifa dia efa ela, ary mbola ho laharam-pahamehana ho an'ny B2B orinasa amin'ny diany mankany amin'ny fanovana nomerika. Ao anatin'ity fiovàna mankany amin'ny nomerika ity, miatrika fanamby sarotra ny fikambanana B2B: mila miantoka ny tsy fitovian'ny roa tonta ary kalitao manerana ny traikefa amin'ny fividianana an-tserasera sy an-tserasera. Na izany aza, na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra ataon'ny fikambanana sy ny fampiasam-bola lehibe amin'ny varotra nomerika sy e-varotra, ny mpividy dia tsy dia gaga loatra amin'ny diany mividy an-tserasera.
Araka ny angon-drakitra vao haingana avy amin'ny Sapio Research momba ny fividianana B2B, efa ho 20% amin'ny mpividy B2B amin'izao fotoana izao no mahatsapa fa ny traikefan'ny mpanjifa ananany an-tserasera dia ambany noho ny an'ny an-tserasera.
Tatitra momba ny mpividy B2022B 2, Ny herin'ny fividianana fifandraisana amin'ny tontolo an-tserasera mivoatra B2B
Ny tatitra, notarihin'ny Sana Commerce, mandinika ny toetry ny traikefan'ny mpividy B2B amin'ny alàlan'ny fakan-tsary avy amin'ny loharano fanta-daza sy azo itokisana indrindra: ny mpividy mihitsy. Anisan'ireo zavatra hita mitsikera indrindra? Mpividy 1 amin'ny 4 ihany no matoky fa misy fikambanana foana manolotra fampahalalana marina manerana ny fantsona an-tserasera sy ivelan'ny mpamatsy azy. Ary raha miresaka na inona na inona ireo teboka angon-drakitra ireo dia ny habaka B2B dia manana toerana betsaka hitombo eo imason'ny mpanjifany manokana.
Noho izany, tahaka ny ahoana ny tena zava-misy amin'ny fividianana B2B amin'ny fomba fijerin'ny mpividy?
Ny mpividy B2B amin'izao fotoana izao dia manao fividianana 428 mahery isan'andro, mandany 3 tapitrisa dolara isan-taona amin'ny Internet. Ny ankamaroan'izy ireo dia mitodika any amin'ny tranokalan'ny e-varotra mpamatsy ho toy ny fantsona safidy rehefa mametraka ireo baiko ireo. Indrisy anefa fa ny 1 amin'ny 5 amin'ireo mpividy ireo dia miatrika fahadisoana amin'ny baiko isak'izao mihetsika izao mividy izy ireo (mitanisa angon-drakitra tsy marina, toy ny firaketana diso, vokatra, fandefasana entana ary fampahalalana momba ny vidiny), ho sakana voalohany. Manodidina ny 94% no mitatitra ny olana niainan'ny mpanjifa amin'ny karazana fividianana B2B. Angamba indrindra indrindra, ny mpividy dia nitatitra ny elanelana goavana eo amin'ny andrasana sy ny zava-misy raha ny momba ny fahaiza-manao manokana amin'ny Internet ao amin'ny B2B.
Miaraka amin'ity karazana traikefa an-tserasera feno korontana ity izay mamely ny mpanjifa B2B, ny fanontaniana miharihary dia lasa: ahoana no ahafahan'ny fikambanana miady amin'ity fahasorenana ity amin'ny lafiny mpividy? Ary ny tena zava-dehibe, inona ny vidiny tsy manao izany?
Nandritra ny areti-mifindra manerantany, ny tsy fandraisana andraikitra dia mety handany ny orinasany. Miatrika amin'ny fahombiazana na ho velona, Pepco Nanararaotra ny vahaolana ERP sy e-varotra mitambatra an'i Sana Commerce, mba hananganana paikady mandeha amin'ny tsena vaovao amin'ny taona 2020. Ny fampidirana e-varotra sy ERP dia nanome toky ny dingana mirindra sy ny traikefan'ny mpividy B2B tsy misy olana.
Ny fomba fiasa nampidirin'i Sana tamin'ny ERP dia tena sarobidy tamin'ny fanampiana an'i Pepco hiodina tsy ho 30 taona mpaninjara solika, kojakoja indostrialy ary HVAC ho amin'ny mpanamboatra sy mpaninjara vokatra be fangatahana, toy ny fanadiovana tanana amin'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera.
Ny mpividy B2B ankehitriny dia mahafantatra izay tadiaviny. Fantany izay andrasany. Ary vonona ny hiala amin'ny mpamatsy ambony azy izy ireo raha tsy mahazo izany.
Maherin'ny 62% amin'ny mpividy B2B no mahatsapa fa ny fanantenan'izy ireo amin'ny tranokalan'ny mpamatsy dia somary kely, na kely. tsy nihaona mihitsy. Tsy mahagaga, vokatr'izany, ny orinasa B4B 10 amin'ny 2 amin'izao fotoana izao dia miatrika fanoherana ny fantsona an-tserasera avy amin'ny mpanjifa. Saingy rehefa nanontaniana momba ny endri-javatra, ny fiasa ary ny tombontsoan'ny mpividy do te-hijery avy amin'ny traikefan'izy ireo amin'ny e-varotra B2B, mazava ho azy ireo ny zavatra tiany hovana, ary ny fomba ahafahan'ny mpamatsy manatsara ny tolotra an-tserasera.
Ny antsasaky ny mpividy B2B nohadihadiana dia manaiky fa ny tolotra toy ny kalitaon'ny vokatra tsara kokoa, ny fahatokisana bebe kokoa ary ny fahatokisana bebe kokoa amin'ny lazan'ny mpamatsy, ny vidin'ny fifaninanana sy ny fepetra fanaterana ary ny serivisy mpanjifa avo lenta no antony lehibe indrindra hitarika azy ireo hividy (sy hividianana indray) avy amin'ny mpamatsy ambony. Anisan'ireo mpividy B2B miatrika fanamby manokana manokana, misy lisitra lava be izay hiantoka ny haavon'ny mpividy personalization. raha ny marina te.
Ho fanampin'ny fitetezana tsotsotra sy ny fisavana haingana, ny mpividy B2B dia maniry ny hahita ny fisian'ny vokatra ho an'ny entana. izy ireo mividy tsy tapaka. Te ho afaka mahita sy mividy mifototra amin'ny ny ny vidin'ny mpanjifa, ny fiverenana ary ny fe-potoana fanaterana, ary ny 28% aza dia maniry ny hifanerasera amin'ny chatbot izay mahafantatra ny tantaran'ny baikony. Mazava izany fa tsy kivy fotsiny ny mpividy B2B. Mitaky tsara kokoa izy ireo ary mitaky bebe kokoa. Soa ihany fa ny Sana Commerce's ERP-integrated platform, Sana Commerce Cloud, dia natao hanatsorana ny fahasarotan'ny fividianana B2B: mampiasa ny angona ERP an'ny fikambanana B2B (toy ny angon-drakitra mpanjifa, fampahalalana momba ny vokatra, ary ny vidin'ny vidiny) mba hanamafisana ny traikefan'ny mpanjifa manana endri-javatra sy vaovao izay mora ampiasaina, mirindra ary azo itokisana.
Rehefa mankamin'ny taona 2022 isika, ny fikambanana dia mamoaka vahaolana e-varotra B2B fotsiny ary miandry ny baiko hidirana, tsy misy fifantohana amin'ny traikefan'ny mpanjifa, dia hahafantatra haingana fa tsy ampy ny asany. Ny traikefa ratsy tsy tapaka an-tserasera dia hanohy hanosika ny mpividy fa tsy hamela ny fantsona e-varotra ho lasa fidiram-bola fanampiny ho an'ny orinasa B2B ─ mandrahona ny fampiasam-bola lehibe amin'ny e-varotra ho fandaniam-bola ho an'ireo fikambanana tsy afaka mahazo ny mpanjifany an-tserasera traikefa hatramin'ny par, ary tsy ho ela.
Tags: 2022 b2b tatitra momba ny mpividyb2bmpividy b2bb2b personalization ny mpividytatitra momba ny mpividy b2bvarotra b2bb2b varotra statistikadia ny mpanjifa b2bb2b manokanab2b mividyERPpepcopersonalizationianaosana commercesana commerce cloudfikarohana sapio
Tim Beyer dia COO manerantany amin'ny fampitomboana ny teknolojia Sana Commerce, ary miorina ao NYC amin'izao fotoana izao amin'ny maha Filoha sy Tale Jeneralin'ny faritr'i Amerika. Manana mari-pahaizana licence momba ny fitantanan-draharaha iraisam-pirenena i Tim ary mari-pahaizana Master roa momba ny fitantanam-bola (MSc) sy ny lalàna ara-bola (LLM, cum laude).